Tag: chitupa | Martech Zone
Agorapulse Academy: Gamuchira Certified muSocial Media
Kwemakore anopfuura gumi, ndanga ndiri mushandisi wemagetsi uye mumiriri weAgorapulse. Iwe unogona kudzvanya uchienda kuchinyorwa chakazara, asi ini ndinongodzokorora kuti ndiyo yakapusa social media management chikuva pamusika. Agorapulse inosanganiswa ne Twitter, Facebook, Facebook Mapeji, Instagram, uye kunyangwe Youtube. Iyo kambani inoshamisa, zvakare, ichipa kungogara kuyerera kwetipipi, marongero, uye zvinowedzera kubvira payakatangwa. Chimwe chiitiko chinonakidza icho Agorapulse anacho ndeye yavo yedzidzo uko
Chii chinonzi Blockchain Technology?
Muvhuro, Zvita 11, 2017 China, December 14, 2017 Douglas Karr
Tarisa kubhiri remadhora, uye uchawana serial nhamba. Pane cheki, iwe unowana yekufambisa uye nhamba yeakaundi. Kadhi rako rechikwereti rine kadhi rechikwereti nhamba. Idzo nhamba dzinoiswa mukati medzimwe nzvimbo kumwe kunhu - kungave mune dhatabhesi yehurumende kana system yebhangi. Sezvaunotarisa dhora, iwe hauzive kuti nhoroondo yaro chii hazvo. Pamwe zvakabiwa, kana pamwe ikopi yekunyepedzera. Zvakaipisisa, pakati
Newlytics: Nzira Nyowani Yekunzwisisa Kushambadzira Kwako
Sezvo takashanda pamwe nemakambani akati wandei uye makuru kumakambani mazhinji nema media akasiyana siyana, takagara tichiona dambudziko rakakosha remakambani asingakwanise kuona kushambadzira kwavo ROI. Kunyangwe nemakambani makuru anoshandisa zvikwata zvevashambadzi vane makore mazhinji echiitiko, kugona kuteedzera mhedzisiro kudzoka kumashandisirwo kuri kushomeka. Nepo nzira dzekushambadzira nedhijitari dzakadai sekushambadzira kwePPC dzakabvumidza vanhu kutora muganho pakati pekushandisa kwavo uye